विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापन र सजावट « NawaYug
प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०४:३८
शेरबहादुर तामाङ (प्रथम विधान महाधिवेशन, मूल व्यवस्थापन समिति)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधनसहित पारित विधानको धारा १३ (क) अनुसार नेतृत्व चयन गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम २०७८ असोज १५–१७ मा ललितपुरको गोदावरीमा प्रथम विधान महाधिवेशन भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्न देहायबमोजिमका समितिहरूको गठन गरिएको थियोः
(क) राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षद्वारा पेस गरिने ।
(ख) सङ्गठनात्मक प्रस्ताव मस्यौदा समिति
संयोजक ः ईश्वर पोखरेल, सदस्यहरुमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ, पद्मा अर्याल ।
(ग) विधान संशोधन मस्यौदा समिति
संयोजक ः विष्णु पौडेल, सदस्यहरुमा सदस्यहरुमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, भानुभक्त ढकाल, राधा ज्ञवाली र प्रभु साह
(घ) विधान महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति
संयोजक ः रामबहादुर थापा, सदस्यहरुमा मणि थापा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, सुशीला नेपाल, सुजिता शाक्य
विनोद श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, खिमलाल भट्टराई र पासाङ शेर्पा ।
विधान संशोधनका लागि अगाडि नै ‘वार्मअप’ कार्यशाला गरेर संशोधनका लागि आवश्यक प्रस्तावहरू तय गरिएको थियो । सोहीबमोजिम तयार पारिएको विधान संशोधन प्रस्तावलाई मातहतका कमिटी र जनसङ्गठनहरूमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । तलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार पारिएको विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको थियो । बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । विधान संशोधन प्रस्तावलाई पुनः संस्थागत र व्यक्तिगत सुझावका लागि खुला गरिएको थियो ।
यसैबीच पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने पार्टीका नेताहरूको अनौपचारिक बैठक पार्टी अध्यक्षसँग भदौ ७ गते भयो र सोही बैठकअनुसार भदौ ८ गते डाकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले डाकियो । सो बैठकको निर्णयअनुसार भदौ १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी विधान महाधिवेशन असोज ४, ५ र ६ मा गर्ने निर्णय भयो । पुनः भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट विधान महाधिवेशन असोज १५, १६ र १७ गते ललितपुर गोदावरीमा नवनिर्मित सनराइज हलमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो । महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा सुरुमा मितिहरू तय भए पनि महाधिवेशनको दस्तावेज र प्रतिनिधिहरूको मापदण्ड के हुनेजस्ता विषयहरूमा राम्रो छलफल नटुङ्गिएका कारण तीनपटकसम्म महाधिवेशन मिति फेरबदल भएको थियो । मङ्सिर १० देखि १२ सम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने पहिले नै तय भइसकेका कारण विधान महाधिवेशन पहिले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।
महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको बैठक चारपटक बस्यो र ती बैठकहरूले १. कार्यक्षेत्र निर्धारण, २. कार्यविभाजन, ३. कार्ययोजना, ४. सचिव चयन सम्बन्धमा निर्णयहरू गरे । जसमा (क) कार्यक्रम स्थल निर्धारण, (ख) हल व्यवस्थापन, (ग) अभिलेख व्यवस्थापन, (घ) स्वयम्सेवक व्यवस्थापन, (ङ) सुरक्षा÷ प्रशासन समन्वय, (च) स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन, (छ). सांस्कृतिक प्रस्तुति व्यवस्थापन, (ज) खाद्य तथा मेस व्यवस्थापन, (झ) आवास व्यवस्थापन, (ञ) यातायात व्यवस्थापन र (ट) आर्थिक व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिए । व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई कार्यविभाजन गरियो । जसमा (क) कार्यक्रमस्थलबारे अध्ययनः सुशीला नेपाल, (ख) हल व्यवस्थापनः शेरबहादुर तामाङ÷सुशीला नेपाल÷विनोद श्रेष्ठ, (ग) अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापन ः शेरबहादुर तामाङ, (घ) आर्थिक व्यवस्थापनः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ÷शेरबहादुर तामाङ, (ङ) स्वयम््सेवक व्यवस्थापनः महेश बस्नेत, (च) सुरक्षा÷प्रशासन समन्वयः शेरबहादुर तामाङ, (छ) स्वस्थ्यसेवा व्यवस्थापन ः सुजिता शाक्य, (ज) सांस्कृतिक प्रस्तुति व्यवस्थापन ः मणिचन्द्र थापा÷खगेन्द्र राई, (झ) खाद्य तथा मेस व्यवस्थापन ः शेरबहादुर तामाङ÷विनोद श्रेष्ठ÷सुशीला नेपाल, (ञ) आवास व्यवस्थापन ः पासाङ शेर्पा, (ट) प्रचार÷मिडिया व्यवस्थापन ः खिमलाल भट्टराई, (ठ) यातायात व्यवस्थापन ः कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो । व्यवस्थापन समितिको सचिव शेरबहादुर तामाङलाई तोकियो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि ३ हजार हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो ।
तसर्थ, हल ३ हजार क्षमताको सनराइज हल रोजिएको थियो । पार्टी स्थायी कमिटी तथा शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकहरूले प्रतिनिधिहरूको मापदण्ड फराकिलो गर्दै जाने क्रममा हलको क्षमताले नपुग्ने देखियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएकै बखत शिलान्यास गरेर उहा“ले नै उद्घाटन गरेको सो हल नै नेपालमा अहिलेसम्म बनेको सबैभन्दा ठूलो हल हो । पार्टीको नेतृत्व तहको पटकपटकको छलफल र स्थायी कमिटीको बैठकहरूको निर्णयका आधारमा प्रतिनिधिको सङ्ख्या भने ३ हजार हुँदै ४ हजार ३ सयबाट फेरि बढेर ५ हजार ५ सय र अन्तिममा असोज १४ गते साँझसम्म ६ हजार ३ सय ४७ हुने तय भयो । त्यसपछि पनि छुटेका धेरैलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका लागि सिफारिसहरू भए र सम्भव भएसम्मका मापदण्ड पुगेका कमरेडहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रवेश गराउने काम भयो । प्रतिनिधिको सङ्ख्याका आधारमा मात्र अन्य व्यवस्थापनको काम हुने गर्छ । व्यवस्थापनको समय पनि धेरै कम भइसकेको थियो भने प्रतिनिधिको सङ्ख्याको समयमै टुङ्गो हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने सम्भावना थियो ।
दस्तावेज र झोलाको तयारी
विधान महाधिवेशन मूलतः नीति महाधिवेशन भएकाले राजनीतिक प्रतिवेशन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव तीनवटा दस्तावेज महाधिवेशनमा सुरुमै बाँडिनुपर्ने हुन्छ । पहिले केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि यी प्रतिवेदनहरू छापेर गरेर बाँड्ने काम सम्पन्न भयो । महाधिवेशन प्रतिनिधि ४ हजार ३ सय हुने अनुमानमा ५ हजार प्रति दस्तावेज छापियो । जब प्रतिनिधि बढ्ने सङ्केत भयो, छपाइ बढाइयो । छापिएका दस्तावेजहरू १५ गते नै वितरण भयो । प्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै नै बढेका कारण सुरुमा छापिएका दस्तावेज अपुग भए । पछि थप दस्तावेजहरू छापेर १६ र १७ गतेसम्म पनि वितरण गरियो । झोला व्यवस्थापन पनि दस्तावेजजस्तै भयो । सुरुमा अनुमान गरिएको सङ्ख्याभन्दा धेरै प्रतिनिधि भएपछि सुरुको क्वालिटीको ब्याग रातारात निर्माण गर्न नसक्दा पछि लोगो मात्र राखेर सामान्य ब्यागसमेत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जसका कारण केही प्रतिनिधिबाट व्यवस्थापन समितिले आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था आयो ।
प्रतिनिधि कार्ड व्यवस्थापन
प्रतिनिधिहरूलाई स्मार्ट कार्डका रूपमा हार्ड कार्ड उपलब्ध गराउने गरी हामीले तयारी ग¥यौँ । सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा धेरै बढी प्रतिनिधि बढे । जिल्ला–जिल्लाबाट फोटोसहित मेलमा पठाउन निर्देशन भएको थियो । धेरै जिल्लाबाट एकमुष्ट रूपमा कार्ड बनाउन फोटो उपलब्ध भए पनि कैयौँ जिल्लाबाट यसरी प्राप्त हुन सकेन । जिल्लाका पदेनबाहेक विविध क्षेत्रबाट प्रतिनिधि हुनुभएका कमरेडहरूका व्यक्तिगत रूपमा इमेल, भाइबर, म्यासेन्जर, वाट्सएपमार्फत र व्यक्तिगत रूपमै सिङ्गल फोटोहरू आउन थाले । प्रतिनिधिको सङ्ख्या ठूलो भएकाले समयमा व्यक्ति व्यक्तिको कार्ड बनाउन हम्मेहम्मे भयो । प्रदेश कमिटीहरूको नामावली महाधिवेशनको एकदुई दिन अगाडि मात्र तय भयो । प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएकाले एकैचोटि व्यवस्थापनलाई कार्ड व्यवस्था गर्न गाह्र्रो भयो । यति हुँदाहुँदै पनि करिब ५ हजार कार्ड बनाउन सकियो भने बाँकी प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन हलमा प्रवेशका लागि अस्थायी कार्डको व्यवस्था गरियो र अस्थायी कार्ड पाएका कमरेडहरूलाई पछि स्थायी कार्ड बनाएर जिम्मेवार कमरेडहरूका साथमा पठाउने काम भइरहेको छ ।
कार्यक्रमस्थल प्रतिनिधिको ठूलो सङ्ख्याका कारण अपुग भइसकेको थियो । सुरुमा मञ्च कस्तो बनाउने केके राख्नेजस्ता विषयमा पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य विष्णु रिमाल, केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठ र यम्स माउसका महेन्द्र श्रेष्ठसहित परामर्श ग¥यौँ । डिजाइन तय भयो । डिजाइनमा अझ थप आकर्षण केके दिन सकिन्छ भनेर पुनः छलफल भयो । कमरेड विष्णु रिमालले मञ्चको अग्रभागको डिजाइनको लुक्स सुरुमा बनेको भन्दा परिवर्तनको नमुना देखाउनुभयो र सोहीअनुसार अग्रभाग तयार भयो, जुन हामी सबैले महाधिवेशनमा देख्यौँ । महाधिवेशनवरिपरि सजावटमा केही नया“ अवधारणा तय ग¥यौँ । पार्टी अध्यक्षलाई सबै प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर पाउन गाह्रो हुने भएकाले अध्यक्षको फोटो कट राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । साथै कमरेड पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहनका कटअप पनि राख्ने व्यवस्था गरियो । त्यस पछि माक्र्स, लेनिनलाई पनि राख्ने योजना भयो । सोहीमुताबिक महाधिवेशन परिसरमा सबै व्यवस्थापन भयो । महाधिवेशनको स्वागतद्वारदेखि महाधिवेशन हलको पछाडिपट्टि आकर्षक नारासमेतको व्यवस्थापन भयो । जति सकिन्छ महाधिवेशनलाई भव्यता दिने हिसाबले तयारी गरियो । काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला कमिटी र मातहतका कमिटीहरू र जनसङ्गठनहरूलाई स्वागतद्वारको व्यवस्थापनको निर्देशन भयो । सोहीअनुसार भव्य स्वागतद्वारहरूको निर्माण भयो । हलभित्र सबैजना नअट्ने भएको र हलभित्रसमेत छेउछाउका प्रतिनिधिहरूले मूल मञ्च राम्रोसँग देख्न नसक्ने भएको हुँदा हलको दायाँबायाँ एलईडी स्क्रिनको व्यवस्था गरियो । त्यसैगरी मूल हलभित्र सबै प्रतिनिधि नअट्ने भएको हुँदा दयाँबायाँ रहेको शाखा हलहरूमा प्रतिनिधिहरू बस्ने व्यवस्था र एलईडी स्क्रिनको व्यवस्थापन भयो ।
महाधिवेशनको प्रचारको लागि खिमलाल भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रचार उपसमिति नै बनाएर मिडिया संयोजन गर्ने काम भयो । डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरूमा डिस्प्ले गर्नेदेखि विभिन्न चोकहरूमा रहेका डिस्प्ले बोर्डहरूको प्रयोग र कार्यक्रमको लाइभ गर्ने काम सम्पन्न भए ।
या संयोजन गर्ने काम भयो । डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरूमा डिस्प्ले गर्नेदेखि विभिन्न चोकहरूमा रहेका डिस्प्ले बोर्डहरूको प्रयोग र कार्यक्रमको लाइभ गर्ने काम सम्पन्न भए ।
मूल व्यवस्थापन समितिले स्वयम््सेवक परिचालन संयोजकको रूपमा महेश बस्नेतलाई जिम्मा लगाएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा स्वयम्सेवकको कमान्ड विनोद श्रेष्ठले सम्हाल्नुभयो । जनसङ्गठन र सम्पर्क मञ्च गरेर जम्मा २ सय जना स्वयम्सेवकको व्यवस्थापन भयो र सबैलाई विभिन्न उपसमूहहरू बनाएर खटाउने व्यवस्था भयो । समूह कमान्डरहरूलाई वाकीटाकी सेट उपलब्ध गराएर कहाँ के भइरहेको छ जानकारी लिने र आवश्यक आदेश सेन्टर कमान्डले दिनेगरी व्यवस्था गरिएको थियो । सबै स्वयम्सेवकका रूपमा खट्ने कमरेडहरूबाट आ–आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह भयो । हरेक दिन बिहान रोलकल हुन्थ्यो र कार्यक्रम सकिएपछि समीक्षा गरेर अर्को दिनको तयारी गरिन्थ्यो ।
खाद्य तथा यातायात व्यवस्थापन
विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा आउने प्रतिनिधिहरूमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पदेन उपस्थिति गराइएको कारण साना सवारी साधनहरूको उपस्थिति धेरै हुने र पार्किङ समस्या हुने देखिएपछि गोदावरीवरपरको क्षेत्रलाई पार्किङ क्षेत्रका रूपमा सबै गाडी अटाउन सक्ने गरी नक्साङ्कन गर्ने काम भयो र सोहीअनुसार पार्किङ व्यवस्थापन गरिएको थियो भने सवारी साधन नहुनेहरुलाई सातदोबाटोबाट जम्बो माइक्रोमा गोदावरी जाने व्यवस्था गरिएको थियो । यसैगरी खाद्यका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध धेरैजसो ठूला क्याटरिङ हाउसबाट रेट र खानाको मेनु प्रतिस्पर्धा गराएर खाद्यको जिम्मेवारी ए–वान ग्रुपलाई दिइयो । एकपटकमा दसौँ हजारलाई एक घण्टाभित्र खाना खुवाउनुपर्ने सर्तसहित जिम्मेवारी लिएको समूहले कुशलतापूर्वक खाना व्यवस्थापन गरेको थियो ।
महाधिवेशनमा छलफलका लागि हलको क्षमता हेरेर कति समूह बनाउँदा उचित हुन्छ भनेर नेतृत्वलाई पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसार १० समूह बनाउ“दा चाहिने आवश्यक हल सङ्ख्याको हिसाब गरेर टेन्टहरूको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले तीनवटा ठुला टेन्ट र अरू समूहलाई मूल हलभित्रै छलफलका लागि स्थान तोकिएको थियो । मूल हलभित्रको समूह छलफलमा अलि साँघुरो भएको महसुस भएको थियो । समूह छलफलमा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राख्दा अरुलाई बाधा नपुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेतृत्वको परामर्श र निर्देशन
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा के भइरेहको छ भनेर निरन्तर जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने काम भएको थियो । असोज १३ गते महाधिवेशन स्थलको निरीक्षणपछि उहाँको आवश्यक निर्देशनअनुसार कामहरू अगाडि बढे । उहाँले काम पहिले नै सम्पन्न गरेर अलि होलो बस्नुपर्ने तर अन्तिम समयमा सम्पन्न गर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ काम नभ्याउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सचेतसमेत गराउनुभएको थियो ।
अन्तिम समयमा रातारात भए पनि सबै व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भयो । महाधिवेशन भव्य बन्यो । महासचिव ईश्वर पोखरेल, सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल, स्यायी कमिटीका सदस्य सुवास नेम्वाङ, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, आर्थिक विभाग प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमाललगायत नेताबाट निरन्तर परामर्श र निर्देशन भइरहे । मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापासहित व्यवस्थापन समितिका सबै सदस्यहरूबाट जिम्मेवारी पाएका कामहरूमा तदारुकताका साथ काम गर्ने र निरीक्षण गरेर समस्या परेको ठाउँमा तत्काल समाधान गर्ने चुस्तताका कारण विधान महाधिवेशनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी सबै सक्षम भयौ ।
विधान महाधिवेशनको अनुभवले अब मङ्सिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अझ उचाइमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह अभूतपूर्व भव्यताको परिकल्पना गरिएको छ । हामी विधान महाधिवेशनदेखि स्थानीय वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन हुँदै दसँ“ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छौँ । यो महाधिवेशनपश्चात् जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य र अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइट गरेर नयाँसदस्यताको आह्वान गरेर विराम नलिई स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा बहुमतका साथ पुनः फर्किने सङ्कल्प सबैले गरौँ । नेकपा (एमाले) लाई सबै पार्टी सदस्यहरूको सुरक्षित घरका रूपमा, जनताको भरोसायोग्य पार्टीका रूपमा र राष्ट्रियताको संरक्षक पार्टीका रूपमा विकास गरौँ । राष्ट्र र जनताले चाहेको राजनेता अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टीलाई थप उचाइमा पु¥याउन हामी सबैले योगदान गरौँ ।